Nomery 33 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
33 Ireto avy ny lalana nalehan’ny zanak’Israely, rehefa nivoaka avy tany Ejipta+ araka ny tafiny+ avy izy ireo, teo ambany fitarihan’i Mosesy sy Arona.+ 2 Nosoratan’i Mosesy foana ireo toerana niaingana isaky ny lalana vitan’izy ireo, araka ny baikon’i Jehovah. Ireto avy izany lalana izany, avy teo amin’ny fiaingana anankiray mankamin’ny anankiray:+ 3 Niainga avy tao Ramesesa+ izy ireo tamin’ny andro fahadimy ambin’ny folon’ny volana voalohany.+ Koa ny ampitson’ny Paska+ avy hatrany, dia nivoaka tamim-pandresena teo imason’ny Ejipsianina rehetra ny zanak’Israely.+ 4 Tamin’izay kosa ny Ejipsianina dia nandevina ny lahimatoa rehetra izay novonoin’i Jehovah teo amin’izy ireo.+ Ary nampiharan’i Jehovah ny didim-pitsarany ny andriamanitry ny Ejipsianina.+ 5 Koa niainga avy tao Ramesesa+ ny zanak’Israely, dia nitoby tao Sokota;+ 6 niainga avy tao Sokota, dia nitoby tao Etama+ teo an-tsisin’ny tany efitra; 7 niainga avy tao Etama, dia niverina ho any Pihahirota,+ izay tandrifin’i Bala-zefona,+ ary nitoby nanandrify an’i Migdola;+ 8 niainga avy tao Pihahirota, dia namakivaky teo afovoan’ny ranomasina+ mba hankany an-tany efitra.+ Nandeha lalana telo andro tany an-tany efitr’i Etama+ izy ireo, dia nitoby tao Mara.+ 9 Ary niainga avy tao Mara izy ireo, dia tonga tao Elima,+ izay nisy loharano roa ambin’ny folo sy hazo palmie fitopolo. Koa nitoby tao izy ireo. 10 Niainga avy tao Elima izy ireo, dia nitoby teo akaikin’ny Ranomasina Mena; 11 niainga avy teo amin’ny Ranomasina Mena, dia nitoby tany an-tany efitr’i Sina;+ 12 niainga avy tany an-tany efitr’i Sina, dia nitoby tao Dopka; 13 niainga avy tao Dopka, dia nitoby tao Alosy; 14 niainga avy tao Alosy, dia nitoby tao Refidima,+ izay tsy nisy rano hosotroin’ny olona; 15 ary niainga avy tao Refidima, dia nitoby tany an-tany efitr’i Sinay.+ 16 Ary niainga avy tany an-tany efitr’i Sinay izy ireo, dia nitoby tao Kibrota-hatava;+ 17 niainga avy tao Kibrota-hatava, dia nitoby tao Hazerota;+ 18 niainga avy tao Hazerota, dia nitoby tao Ritma; 19 niainga avy tao Ritma, dia nitoby tao Rimona-pereza; 20 niainga avy tao Rimona-pereza, dia nitoby tao Libna; 21 niainga avy tao Libna, dia nitoby tao Risa; 22 niainga avy tao Risa, dia nitoby tao Kehelata; 23 ary niainga avy tao Kehelata, dia nitoby teo amin’ny Tendrombohitra Sapera. 24 Ary niainga avy teo amin’ny Tendrombohitra Sapera, dia nitoby+ tao Harada; 25 niainga avy tao Harada, dia nitoby tao Makelota; 26 niainga+ avy tao Makelota, dia nitoby tao Tahata; 27 niainga avy tao Tahata, dia nitoby tao Tera; 28 niainga avy tao Tera, dia nitoby tao Mitka; 29 niainga avy tao Mitka, dia nitoby tao Hasmona; 30 niainga avy tao Hasmona, dia nitoby tao Moserota; 31 niainga avy tao Moserota, dia nitoby tao Bene-jakana;+ 32 niainga avy tao Bene-jakana, dia nitoby tao Hora-hagidgada; 33 niainga avy tao Hora-hagidgada, dia nitoby tao Jotbata;+ 34 niainga avy tao Jotbata, dia nitoby tao Abrona; 35 niainga avy tao Abrona, dia nitoby tao Eziona-gebera;+ 36 ary niainga avy tao Eziona-gebera, dia nitoby tao an-tany efitr’i Zina,+ izany hoe i Kadesy. 37 Ary niainga avy tao Kadesy izy ireo, dia nitoby teo amin’ny Tendrombohitra Hora,+ teo amin’ny sisin-tanin’i Edoma. 38 Dia niakatra tao amin’ny Tendrombohitra Hora i Arona mpisorona, araka ny baikon’i Jehovah, ary maty tao izy tamin’ny taona fahefapolo nivoahan’ny zanak’Israely avy tany Ejipta, tamin’ny andro voalohan’ny volana fahadimy.+ 39 Telo amby roapolo amby zato taona i Arona tamin’izy maty tao amin’ny Tendrombohitra Hora. 40 Ren’ilay Kananita, mpanjakan’i Arada,+ izay nonina tany Negeba,+ tany Kanana, fa tonga ny zanak’Israely. 41 Ary niainga avy teo amin’ny Tendrombohitra Hora+ ny zanak’Israely, dia nitoby tao Zalmona; 42 niainga avy tao Zalmona, dia nitoby tao Ponona; 43 niainga avy tao Ponona, dia nitoby tao Obota;+ 44 niainga avy tao Obota, dia nitoby tao Ie-abarima, teo amin’ny sisin-tanin’i Moaba;+ 45 niainga avy tao Ima, dia nitoby tao Dibona-gada;+ 46 niainga avy tao Dibona-gada, dia nitoby tao Almona-diblataima; 47 niainga avy tao Almona-diblataima,+ dia nitoby tany amin’ireo tendrombohitr’i Abarima,+ tandrifin’i Nebo;+ 48 ary niainga avy tany amin’ireo tendrombohitr’i Abarima, dia nitoby teny amin’ny lemaka karakaina any Moaba,+ teo akaikin’ny Reniranon’i Jordana, tandrifin’i Jeriko. 49 Ary mbola nitoby teo akaikin’ny Reniranon’i Jordana izy ireo, nanomboka tany Beti-jesimota+ ka hatrany Abela-sitima,+ teny amin’ny lemaka karakaina any Moaba. 50 Ary hoy i Jehovah tamin’i Mosesy, teny amin’ny lemaka karakaina any Moaba, teo akaikin’ny Reniranon’i Jordana, tandrifin’i Jeriko:+ 51 “Mitenena amin’ny zanak’Israely hoe: ‘Hiampita an’i Jordana ianareo izao, ka hiditra ao Kanana.+ 52 Roahy tsy ho eo anatrehanareo ny mponina rehetra ao amin’ilay tany, ary poteho ny sarivongana rehetra nataon’izy ireo tamin’ny vato.+ Poteho+ koa ny sarivongany metaly+ rehetra, sy ny toerana avo masina rehetra eo amin’izy ireo. 53 Ary alaivo ho fanananareo ilay tany, ka aoka ianareo honina ao, satria ianareo no homeko an’ilay tany mba ho fanananareo.+ 54 Dia zarao ho anareo ilay tany araka ny fianakaviana+ eo aminareo, ka antsapaka+ no hizaranareo azy. Ampitomboy ny lovan’izay maro, ary ahenao kosa ny lovan’izay vitsy.+ Izay tany azony amin’ny antsapaka no ho lasany.+ Ary araka ny fokon’ny razanareo no hahazoanareo tany.+ 55 “‘Fa raha tsy roahinareo tsy ho eo anatrehanareo ny mponin’ilay tany,+ dia ho malailay ao anaty masonareo sy ho tsilo eo amin’ny tehezanareo ny olona avelanareo honina ao, ary hampijaly anareo eo amin’ilay tany honenanareo.+ 56 Ary izay nokasaiko hanafaizana azy no hanafaizako anareo.’”+